ဝဘ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် Ubuntu (သို့မဟုတ်အခြား distro) ကိုပြင်ဆင်ပါ Linux မှ
အလက်ဇန်းဒါး (ခေါ် KZKG ^ ဂါရာ) | | အပ်ဒိတ်လုပ်ထားသည်။ 15/09/2016 23:57 | သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ
GNU / Linux ကိုအသုံးပြုရန်ရှုပ်ထွေးသည်ဟူသောဒဏ္,ာရီများ၊ ယုံကြည်မှုများသို့မဟုတ်ထင်မြင်ချက်များအပြင်၊ ၎င်းသည် developer များအထူးသဖြင့်အထူးကောင်းမွန်သော Operating System တစ်ခုဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ယူမှတ်သည် web developer များ.
ငါပိုနှစ်သက်သူအများအပြားနှင့်စကားပြောဖို့အခွင့်အလမ်းရှိသည် OS X ကို ပင် Windows ကို ၎င်းသည်လွယ်ကူခြင်းနှင့်၎င်း၏ကိရိယာများကြောင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လူတစ် ဦး ချင်းစီ၏တစ် ဦး ချင်းအယူအဆဖြစ်သော်လည်း GNU / Linux ဖြန့်ဖြူးခြင်းသို့မဟုတ်အနည်းဆုံးလူကြိုက်အများဆုံးမည်သည့်အရာသည်သင် install လုပ်ရန်နှင့်အလုပ်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်ကိုပေးသည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။
[quote] လူကြိုက်အများဆုံးဖြန့်ဝေမှုများသည် web developer အတွက်၎င်းတို့၏ repositories တွင်လိုအပ်သော package အားလုံးကိုပေးသည်။
အခုတော့ဖွံ့ဖြိုးရေးပြissueနာအပေါ်အကြပ်အတည်းရှိပါတယ်, ကဲ့သို့အလွန် updated ဖြန့်ဝေသည် ဆုံ သိုမဟုတ်သိုမဟုတ်တည်ငြိမ်မှုနှင့်ခေတ်နောက်ကျအကြားမျှတမှုကိုထိန်းသိမ်းထားသောအရာတစ်ခု Ubuntu ကို?
ငါနေစဉ်အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ဥပမာထားပါ Ubuntu Trusted ၏နောက်ဆုံးဗားရှင်း Netbeans 7.0.1 ဖြစ်ပါတယ် ArchLinux ဗားရှင်း 8.0.2 ရရှိနိုင်ပါသည်။ အတူတူပါပဲဖြစ်ပျက် NodeJS နှင့်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုသောအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအခြားအစုများ ရှေ့ဆုံးကို.
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ လူတိုင်းကမိမိတို့ပြုလုပ်လိုသောအလုပ်နှင့်အညီမိမိတို့၏ကြိုက်နှစ်သက်ရာဖြန့်ဖြူးမှုကိုရွေးချယ်ရန်ဆုံးဖြတ်သည်။ ဤဆောင်းပါးအတွက် Ubuntu ထည့်သွင်းမှုမှကျွန်ုပ်တို့စတင်မည်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်အသုံးပြုသူအသစ်များအပေါ်အဓိကထားသောကြောင့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုတစ်ဆင့်ချင်းပြသပါလိမ့်မည်။
1 Ubuntu 14.04 ကို Install လုပ်ပါ
1.1 Ubuntu 14.04 Installation အဆင့်များ
2.1 Bitnami ကို install လုပ်ပါ
2.2 XAMPP တပ်ဆင်မှု
2.3 Custom XNSP နှင့် DNS နှင့် Virtual Host
2.4 လက်စွဲစာအုပ် LAMP တပ်ဆင်ခြင်း
2.5 Custom LNS ကိုအသုံးပြုထားသော DNS နှင့် Virtual Host
2.6 NodeJS နှင့် Ruby ထည့်သွင်းမှု
3 Web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာကိရိယာများ
Ubuntu 14.04 ကို Install လုပ်ပါ
ပထမဆုံးလုပ်ရမှာက Ubuntu installation image ကိုသူ့ရဲ့တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကနေ download လုပ်ပါ။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော link သည် 32-bit သို့မဟုတ် 64-bit iso ကို download လုပ်ရန်ရွေးချယ်ခွင့်ပြုသည်။
Ubuntu ကို Download လုပ်ပါ
ကျွန်တော်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးတာနဲ့ download လုပ်ထားသော iso ပါသော DVD ကို "ကူး" ရမည်သို့မဟုတ်၎င်းမှ boot နှင့် install လုပ်ရန် Flash memory ကိုပြင်ဆင်ရမည်။ ၀ င်းဒိုးမှာအောက်ပါအတိုင်းလုပ်နိုင်ပါတယ် ဒီလမ်းညွှန် နှင့် Mac ပေါ်မှာ ဒီဟာ။ ဒါပြီးပြီဆိုရင် PC ကို restart လုပ်ပြီး memory ဒါမှမဟုတ် DVD ကိုစဖွင့်လိုက်တယ်။
Ubuntu 14.04 Installation အဆင့်များ
သင်၏အချက်အလက်များဆုံးရှုံးခြင်းမရှိဘဲ Ubuntu ကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်ကိုမသေချာပါက၎င်းကို VirtualBox ရှိ virtual machine အသုံးပြု၍ သော်လည်းကောင်းသင်၏ data အားလုံးကိုလုံခြုံသောနေရာတွင်လည်းကောင်း၊ ပြင်ပ disk သို့အရန်ကူးယူထားခြင်းဖြင့်လည်းကောင်းထည့်သွင်းနိုင်သည်။
ပထမဆုံးအချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ Ubuntu ကို install ချင်တဲ့ဘာသာစကားရွေးပါ။
နောက်ပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် hard drive ကိုခွဲထုတ်လိုက်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ဤအရာကိုမအတွေ့အကြုံရှိပါကသင်၏ဒေတာများကိုအရံသိမ်းဆည်းပြီးသည်နှင့်အရာအားလုံးကိုပုံမှန်အဖြစ်မှချန်ထားခြင်းသည်ပိုကောင်းသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏သုံးစွဲသူအမည်၊ ကွန်ပျူတာအမည်၊ လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကိုကျွန်ုပ်တို့သတ်မှတ်ပါသည်။
Installer ပြီးသည်နှင့်ကွန်ပျူတာကိုပြန်ဖွင့်ပြီး session ကိုစတင်ပါ။ Update Manager ကိုဖွင့ ်၍ terminal ကိုဖွင့်ပြီးကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သည်။
ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် developer များအနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သိသည်များကိုသာအာရုံစိုက်ချင်ကြသည်။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်။ ဝဘ်ဆာဗာကိုမည်သို့ပြင်ဆင်ရမည်၊ ဒေတာဘေ့စ်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့စိတ်ဝင်စားခြင်းမဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့အလုပ်လုပ်သောအရာတစ်ခုခုသာလိုအပ်ပြီးကုဒ်ရေးရန်စတင်ရန်လွယ်ကူသည်။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် HTML, CSS, JS ဖြင့်သာရေးသားခဲ့လျှင်ပိုမိုလွယ်ကူလိမ့်မည်။ သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံတွင် PHP, Ruby, DJango စသဖြင့် code ဆာဗာရှိရမည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုအကြံပြုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင် web server ကို set up လုပ်ပါ။ ကံကောင်းတာကငါတို့အတွက်ဒီစက်ရုံကိုနည်းနှစ်နည်းနဲ့လုပ်ထားတယ်။
installer ကိုအသုံးပြုခြင်း XAMPP အဘယ်အရာကိုကျွန်တော်တို့ကိုထောက်ပံ့ပေး Apache ကို.
သုံးပြီး မီးခွက် Bitnami.
Bitnami ကို install လုပ်ပါ
Bitnami မှတစ်ဆင့် LAMP တပ်ဆင်မှု ငါတို့တွေ့ပြီးပြီ ပြီးခဲ့သည့်ဆောင်းပါး၌၎င်းကိုဤဆောင်းပါး၌ဖော်ပြရန်မလိုအပ်ပါ။ Bitnami ကို install လုပ်ပြီးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ web server မှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ test server ကိုစီမံနိုင်သည်။
Bitnami မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်နှင့်ပတ်သက်သောလိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းအားလုံးကိုတွေ့နိုင်သည် သူ၏ဝီကီ.
XAMPP installer သည် Bitnami မှလည်းလာသည်။ သို့သော် installation လုပ်ငန်းစဉ်သည်အနည်းငယ်ကွဲပြားသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုတစ်ဆင့်ချင်းတွေ့မြင်ရလိမ့်မည်။ ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပရိုဆက်ဆာ၏ဗိသုကာအရကျွန်ုပ်တို့ကိုစိတ်ဝင်စားသောဖိုင်ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်ဖြစ်သည်။
XAMPP 32-bits XAMPP 64-bits
ဒေါင်းလုပ်ချပြီးတာနဲ့ကျနော်တို့ terminal ကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ဖိုင်ရှိသည့်ဖိုင်တွဲကိုကျနော်တို့ခွင့်ပြုချက်ပေးလိမ့်မည်သောဖိုင်တွဲကိုဝင်ရောက်။ 64 Bit ဖိုင်အတွက် -
ယခု terminal တစ္ခုထဲ၌ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအရာကိုလုပ်ဆောင်ကြသည်။
ပုံမှန်အားဖြင့်အရာအားလုံးကိုလက်ခံဖို့အကြံပြုလိုတယ်၊ အဲဒါကိုငါတို့သာပေးရမယ် ဝင်ရောက်
အရင်ပုံမှာ developer တွေအတွက် file တွေ install လုပ်ချင်သလား၊ နောက်တစ်ခုမှာရွေးလိုက်တာကိုသဘောတူလားမေးတယ်။
ယခုကျွန်ုပ်တို့ install လုပ်လိုသောလမ်းကြောင်းကိုကျွန်ုပ်တို့အားမေးသည် (ပုံမှန်အားဖြင့်၎င်းသည် / opt / lampp) ဖြစ်ပြီး၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောင်းလဲနိုင်သည်ဖြစ်သော်လည်း၎င်းကိုဆက်လက်ထားရှိရန်အကြံပြုလိုပါသည်။
ယခု XAMPP ကိုစတင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်ပါအတိုင်းလုပ်ဆောင်ရမည်။
$ sudo / opt / lampp / lampp စတင်ပါပြီ Linux 5.5.19-0 အတွက် XAMPP စတင် ... XAMPP: Apache ကိုစတင်ခြင်း ... ok ။ XAMPP: MySQL စတင်ခြင်း ... အိုကေ။ XAMPP: ProFTPD စတင်ခြင်း ... ကောင်းပြီ။
ဤနည်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Apache + MySQL + PHP + Perl ဆာဗာကိုလည်ပတ်နေပြီးဖြစ်သည်။ ပြaနာရှိရင်မင်းကိုသွားလည်ဖို့အကြံပေးပါ မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ.
Custom XNSP နှင့် DNS နှင့် Virtual Host
ကျွန်ုပ်တို့၏စမ်းသပ်မှုဆာဗာတွင်ဆိုဒ်များစွာရှိသည်ဟုယူဆလျှင်ဖိုင်တစ်ခုချင်းစီကိုကြည့်ရှုရန်သတ်မှတ်နိုင်သည် / etc / hosts။ ဥပမာတစ်ခုကြည့်ကြရအောင်၊ ငါတို့မှာ site ရှိတယ်ဆိုပါစို့ dev.tests.com, ငါတို့အဘယ်သို့ပြုဖိုင်ကိုဖွင့်သည် / etc / hosts ကျွန်ုပ်တို့ကြိုက်နှစ်သက်သော text editor (နှင့် root ကဲ့သို့) ဖြင့်၎င်းကိုအောက်ပါနည်းလမ်းဖြင့်ထည့်ပါ။
ဒါပေမယ့်ဒါကမလုံလောက်သေးပါဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တစ်ယောက်ယောက်ကတောင်းဆိုမှုတစ်ခုပြုလုပ်တဲ့အခါ Apache ကိုကျွန်တော်တို့ပြောရမယ် dev.test.com 127.0.0.1 အတွက်, သင်သည်ငါတို့၏စမ်းသပ် site ကိုပြန်လာရန်ရှိသည်။
ယခုငါတို့ဖိုင်သို့သွားပါ /opt/lampp/etc/extra/httpd-vhosts.conf ဒီဟာကဒီလိုမျိုးဖြစ်သင့်တယ် -
# ဆာဗာသည် # IP လိပ်စာများကိုစိတ်ပူစရာမလိုပါ။ ဤသည်ကိုအောက်ပါညွှန်ကြားချက်များတွင်ကြယ်ပွခြင်းဖြင့်ညွှန်ပြနေသည်။ # # စာရွက်စာတမ်းများကို # တွင်ကြည့်ပါ။ virtual hosts များကိုတပ်ဆင်ရန်မကြိုးစားမီနောက်ထပ်အသေးစိတ်အတွက် # # ။ # # သင်သည်သင်၏ virtual host # configuration ကိုအတည်ပြုရန် command line option ကို -S သုံးနိုင်သည်။ # # VirtualHost ဥပမာ - # မည်သည့် Apache ညွှန်ကြားချက်မဆို VirtualHost container ထဲသို့ဝင်နိုင်သည်။ # ပထမ VirtualHost အပိုင်းသည်မည်သည့်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုတွင်မဆို # ServerName သို့မဟုတ် ServerAlias ​​နှင့်မကိုက်ညီသောတောင်းဆိုမှုများအားလုံးအတွက်အသုံးပြုသည်။ # ServerAdmin / dummy -host.example.com-error_log "CustomLog" logs / dummy-host.example.com-access_log serverAdmin ဘုံ "logs / dummy-host2.4.example.com-access_log"
# ဆာဗာသည် # IP လိပ်စာများကိုစိတ်ပူစရာမလိုပါ။ ဤသည်ကိုအောက်ပါညွှန်ကြားချက်များတွင်ကြယ်ပွခြင်းဖြင့်ညွှန်ပြနေသည်။ # # စာရွက်စာတမ်းများကို # တွင်ကြည့်ပါ။ virtual hosts များကိုတပ်ဆင်ရန်မကြိုးစားမီနောက်ထပ်အသေးစိတ်အတွက် # # ။ # # သင်သည်သင်၏ virtual host # configuration ကိုအတည်ပြုရန် command line option ကို -S သုံးနိုင်သည်။ # # VirtualHost ဥပမာ - # မည်သည့် Apache ညွှန်ကြားချက်မဆို VirtualHost container ထဲသို့ဝင်နိုင်သည်။ # ပထမ VirtualHost အပိုင်းသည်မည်သည့်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုတွင်မဆို # ServerName သို့မဟုတ် ServerAlias ​​နှင့်မကိုက်ညီသောတောင်းဆိုမှုများအားလုံးအတွက်အသုံးပြုသည်။ # DocumentRoot "/ home / path / folder / project /" ServerName my_blog.dev ခွင့်ပြုအားလုံးလိုအပ်သည်
သိသာထင်ရှားတဲ့အစားထိုးတဲ့အခါငါတို့စီမံကိန်းဖိုင်တွဲ၏လမ်းကြောင်းကိုသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်သည် "/ မူလစာမျက်နှာ / လမ်းကြောင်း / ဖိုင်တွဲ / စီမံကိန်း /".
လက်စွဲစာအုပ် LAMP တပ်ဆင်ခြင်း
အခုတော့အဲဒါကိုမထင်ရပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ repositories ကနေ package တွေကိုတိုက်ရိုက် install လုပ်ခြင်းထက်ယခင်နည်းလမ်းဖြင့် installation ကိုလုပ်ရန် ပို၍ ခက်ခဲသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ PC တွင် Stack တူရန်ကျွန်ုပ်တို့ terminal ကိုဖွင့်ပြီးထားရမည်။
Custom LNS ကိုအသုံးပြုထားသော DNS နှင့် Virtual Host
DNS (Domain Name Server) ၏အစိတ်အပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အရာအားလုံးကိုအတူတူပင်ဖြစ်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့၏စမ်းသပ်မှုဆိုက်များ၏အမည်များကိုဖိုင်ထဲတွင်ထည့်သည် / etc / hosts။ ယခု Apache ကိုကြည့်လျှင် VHost (Virtual Hosts) လမ်းကြောင်းသည်ကွဲပြားနေသည်။
ပုံမှန်အားဖြင့်ပြုသောအရာသည်ငါတို့ဖိုင်ထဲမှာထည့်သောအရာကိုနေရာချခြင်းဖြစ်သည် /opt/lampp/etc/extra/httpd-vhosts.conf လမ်းကြောင်းထဲမှာ /etc/apache2/sites-available/vhostname.confထို့နောက်ဖိုင်တွဲရှိထိုဖိုင်ကိုသင်္ကေတလင့်တစ်ခုလုပ်သည် / etc / apache2 / sites-enabled / ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ရှုပ်ထွေးသွားကြသည်မဟုတ်။ ဖိုင်ကိုတိုက်ရိုက်ထည့်သည် / etc / apache2 / sites-enabled / အောက်ပါပြင်ဆင်မှုနှင့်အတူ:
$ sudo vim /etc/apache2/sites-enabled/dev.prnza.com.conf DocumentRoot "/ home / path / folder / project /" ServerName my_blog.dev ခွင့်ပြုအားလုံးလိုအပ်သည်
ကျွန်ုပ်တို့ကို manually install လုပ်သည့်အခါ website folders များ၏မူလလမ်းကြောင်းသည်ရှင်းလင်းရန်အတွက်မှန်ကန်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည် / var / www / http /.
NodeJS နှင့် Ruby ထည့်သွင်းမှု
ငါတို့သုံးမယ်ဆိုရင် NodeJS o ပတ္တမြား (PHP နှင့် Perl အစား) package များကိုကိုယ်တိုင် console တွင်အသုံးပြုခြင်းဖြင့်ကိုယ်တိုင်ထည့်နိုင်သည်။
နောက်ပြီးသူတို့ကနောက်ထပ် package တွေလိုအပ်မယ်ဆိုရင်သူတို့က package manager ဒါမှမဟုတ် console မှာရှာပြီးရှာရမှာပဲ။
ဤအပိုင်းအထိဆာဗာအပိုင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ sandbox အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ ဖြစ်၍ ယခုကျွန်ုပ်တို့သုံးနိုင်သောအသုံးချပရိုဂရမ်အချို့ကိုကြည့်ကြစို့။
repositories တွင် HTML, CSS, JS နှင့်အခြားအရာများနှင့်သက်ဆိုင်သောကျွန်ုပ်တို့အားသက်တောင့်သက်သာအလုပ်လုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည့် application အချို့ရှိသည်။ သူတို့တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်
ဖြစ်ခြင်း bluefish (ကျနော့်အမြင်တွင်) ၎င်းသည်အလုပ်မလုပ်သောအခါအပြည့်စုံဆုံးဖြစ်သည် ရှေ့ဆုံးကိုလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းပိုပေးသော third-party application များ install လုပ်ရန်ကျွန်ုပ်အကြံပြုပါသည်။ ကျနော်တို့ဥပမာရှိသည် ကွင်း, မြင့်မြတ်သောစာသား o Komodo-Edit ကို။ ဤအပလီကေးရှင်းအားလုံးတွင်ကိုယ်ပိုင် Ubuntu ထည့်သွင်းထားသော package ရှိသည်။ Komodo-Edit မှလွဲ၍ unzipped လုပ်ရန်နှင့် .sh file run ရန်သာဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ » Web Development အတွက် Ubuntu (သို့မဟုတ်အခြား distro) ကိုပြင်ဆင်ပါ
ဒီ Ubuntu ဗားရှင်းကဆိတ်ပုံထဲမှာတစ္ဆေလင်းနို့တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုတွေ့လား။
Hahaha အမှန်ပဲ .. လိမ္မော်ရောင်မုတ်ဆိတ်နှင့်နှုတ်ခမ်းတို့၏အခေါင်းပေါက်များကိုသာကြည့်ခြင်း true
အခုသင်ပြောပြီ ... ဒါက Pareidolia လို့ခေါ်တယ်။
ပရိုဂရမ်းမင်းအတော်လေးရှုပ်ထွေးသောအခါဘယ်ရွေးချယ်စရာ Distros အကြောင်း။ "ယခင်က" ၎င်းကို browser နှင့် voila စုံတွဲတစ်တွဲအတွက်တီထွင်ခဲ့သည်၊ ယနေ့တွင် WEB application များကိုတီထွင်ရန်၊ ၎င်းကို ASP.Net, PHP, JAVA, အစရှိသည့် browsers များနှင့်ပလက်ဖောင်းများအလွန်များပြားနေသည်။ applications များ transversal ပိုများသောနေရာများ၊ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတို့သည်ပုံမှန် desktop သို့မဟုတ် laptop ကွန်ပျူတာများမှ ၀ င်ရောက်ရုံသာမက tablet, mobile စသည်ဖြင့်ပြီးမြောက်ပြီးဖြစ်သည် (တူညီသောလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုလိုချင်သည်)
ယနေ့ငါပထမ ဦး ဆုံးစောင့်ရှောက်ခြင်း, ပထမ ဦး ဆုံးအပေါငျးတို့သ applications များ၏တည်ငြိမ်မှုနှင့်လုံခြုံမှုကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်လိုအပ်သည်ဟုယုံကြည်, ငါအကြောက်လွန်ရောဂါဖြစ်ကြောင်းကို, ထိုသဘောသဘာဝအတွက်, ငါနေဆဲကနေဘဏ်လုပ်ငန်းငွေပေးငွေယူထုတ်ယူဖို့အများကြီးကုန်ကျနေဆဲ, ကျွန်ုပ်၏ပစ္စည်းမဟုတ်သောအခြားကိရိယာကျွန်ုပ်သည်အကြိမ်ပေါင်းများစွာကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏အိမ်၏လုံခြုံမှုကိုနားလည်ရန်ယုတ္တိမတန်သည့်တိုင်ရောက်ရှိရန်မျှော်လင့်ပါသည်။
အခြား။ ရိုးရိုးသားသားပြောပါရစေ။ ပရိုဂရမ်မာအများစု (အနည်းဆုံးကျွန်ုပ်သိသောအရာများ - သူတို့၊ web၊ JAVA, BB.DD စသည်ဖြင့်) လူသိများသည်မှာအနည်းဆုံး ၈၀% သည်ပရိုဂရမ်တွင် Unix ပလက်ဖောင်းကိုသုံးကြသည်။ ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်ကမ်းလှမ်းထားသောကိရိယာများအားလုံးမရှိဘဲလွတ်လပ်စွာပွင့်လင်းစွာပြောဆိုသူများသည်ရှေ့သို့ရွေ့လျားရာတွင်အလွန်ရှုပ်ထွေးလိမ့်မည်။ ဒါ့အပြင် WEB ပလက်ဖောင်းတစ်ခုလုံးဒါမှမဟုတ် BB.DD. တစ်ခုလုံးနီးပါးပြောနိုင်ပါတယ်။ ၎င်းကို Unix server ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားသဖြင့်အခြားအပိုင်းသည်အလားတူအလုပ်လုပ်ရန်ယုတ္တိရှိမည်မဟုတ်လော။
တက် Shut ... ငါ Batman ပါ!
ဒါကမှန်တယ် .. ဒီမှာငါတို့နောက်တစ်ကြိမ်ကြည့်ပြီးနောက်အတူတူထင်ပါတယ်
ငါအဓိကအားဖြင့် PHP developer တစ်ယောက်ပါ။ Debian ကိုကျွန်ုပ်၏လုပ်ငန်းခွင်ပတ် ၀ န်းကျင်အဖြစ်နှစ်ပေါင်းများစွာအသုံးပြုခဲ့ပြီး၊ post ၌ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း distro အသုံးပြုရန်ဆုံးဖြတ်ချက်သည်လူတစ် ဦး ချင်းစီအပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ဘဝကိုပိုမိုလွယ်ကူစေသောကိရိယာများ။
မှတ်ချက်တစ်ခုအနေနှင့်အချို့နေရာများတွင် developer အချို့သည် XAMPP, LAMP နှင့် / သို့မဟုတ်ဆင်တူသည်ကို Linux တွင်တွေ့ရသည်။ Linux တွင် apache သည်ဇာတိဖြစ်ကြောင်းမှတ်မိသောကြောင့်၊ ဥပမာ - ငါ apache2 နှင့် php5 ကိုကျွန်ုပ် Debian ပေါ်တွင်သာ install လုပ်သည်။ ပုံမှန် (aptitude install apache2 php5) နှင့် voila တို့ဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏စီမံကိန်းများကို / var / www ထဲသို့ထည့်ခြင်း မှလွဲ၍ အခြားဘာမှလုပ်စရာမလိုတော့ပါ။
Hugo Santos သို့ပြန်သွားပါ
Tecno-Integra အလိုအလျောက် ဟုသူကပြောသည်
လေးစားပါတယ် apache2 နှင့် php5 ကို install လုပ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလွန်ကောင်းမွန်ပါသည်၊ သို့သော် mysql ကိုထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သကဲ့သို့ကျွန်ုပ်လည်း phpmyadmin ကိုမည်သို့ပြင်ဆင်မည်နည်းဟုကျွန်ုပ်ခံစားမိသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Tecno-Integra Automation ကိုတုန့်ပြန်ပါ
ရိုးရိုးသားသားပြောရရင် Dreamweaver ကအဲ့ဒီပရိုဂရမ်တွေအားလုံးကိုဖြတ်သန်းရပေမယ့်စိတ်မကောင်းစရာဖြစ်ပေမယ့် Linux မှာတော့ဒီ Adobe ပရိုဂရမ်ရဲ့အမြင့်ဆုံးမှာတစ်ခုခုမရှိဘူး။
ဟုတ်တယ်၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလည်းရှိတယ်။ ဒါကို Brackets လို့ခေါ်ပြီး Vim နဲ့ Emacs တို့ကိုလည်းထည့်သွင်းထားသည်။ : v
Dreamweaver လို့ခေါ်တဲ့ dumpster ဟုသူကပြောသည်
အမှိုက်သရိုက်များကိုသင်တန်းကျောင်းတွင်ထည့်သွင်းခြင်း Dreamweaver သည်လူအားလုံးကိုဖြတ်သန်းသွားသည်
That Dumpster အမည်ရှိ Dreamweaver ကိုစာပြန်ပါ
Dreamweaver သည်ပရိုဂရမ်မာများထက်ဒီဇိုင်းသမားများအတွက်ဖြစ်သည်၊ ကုဒ်နှင့်အလုပ်လုပ်သောသူများအတွက်အလွန်ခက်ခဲပြီးနှေးကွေးသည်။ သူတော်ကောင်းတရား၏စာသား၊ ကွင်းခတ် (သို့) webStorm / phpStorm ကဲ့သို့သောပရိုဂရမ်တစ်ခုကိုအသုံးပြုရန် ပို၍ လွယ်ကူသည်။ ငါ Dreamweaver ငါသုံးခဲ့တဲ့အချိန်တွေမှာပြသနာတွေရှိတယ်၊ ငါ့ရဲ့ code ကိုအဆင်သင့်ထားပြီးတဲ့နောက်ဒီဇိုင်းပုံစံကိုငါသွားခဲ့တယ်။ အမှတ်တစ်ခုထည့်ပြီးတစ်ခုခုရွှေ့မယ်ဆိုရင် Dreamweaver ငါသပ်ရပ်စွာကျန်ရှိခဲ့သောငါ့ကုဒ်ကိုလုံးဝဖယ်ထုတ်ဖို့ဂရုစိုက်သည်။ ဒါကြောင့်ငွေပေးချေမှုဟုမပြောပါ။ ငါမှာဒီဇိုင်နာသူငယ်ချင်းတွေရှိတယ်၊ သူတို့အတွက်ထူးဆန်းတယ်၊ သူတို့ကကုဒ်တစ်ကြောင်းတည်းမရေးဘဲစာမျက်နှာတစ်ခုလုပ်နိုင်တယ်။
breamweaver Hahaha အကယ်၍ သင်သည်ကလစ်လုပ်ရန်သင်ယူမည်ဆိုပါကကျွန်ုပ်နှင့်ဘယ်သောအခါမျှသင်ယူမည်မဟုတ်ပါ
Dreamwho? … Baff, buddy, Artisteer, Dreamweaver, အားလုံးသည်စင်ကြယ်သော bullshit များဖြစ်သည်။
သူတို့က junk code လိုင်းခုနစ်ရာ၊ မလိုအပ်တဲ့ tags တွေ၊ ရည်မှန်းချက်စတာတွေစသည်တို့ကိုထားခဲ့တယ်။
Sublime, brackets, CSS တစ်ခုခုကိုလုပ်ရန်လုံလောက်သည်ထက်ပိုသည်။
Dreamweaver ထက် Aptana Studio3ပိုကောင်းသည်။
သင်ဘာပြောလိုက်တာလဲ? အိပ်မက်ဆိုး ပြီးတော့ soooo queee essss?
Sherpa ၉၀ ဟုသူကပြောသည်
သင့်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသောအမှိုက်သရိုက်ကုဒ်များအားလုံးကိုသင်မြင်တွေ့ရလိမ့်မည်။ dreamweaver သည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မဟုတ်သောကာလအတွက်ဖြစ်သည်။
တကယ်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ post ကို
သင်၏အချက်အလက်သည်အလွန်အသုံးဝင်သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ Ubuntu / Debian ရေကိုပြန်သွားပါသလား။
HAHA သူ Debian အတွက်အမြဲတမ်းနေရာတစ်ခုထားပေးသည်။ သို့သော်… Ubuntu ငါဒါဟဲဟဲလို့မထင်ဘူး
ဘယ်တော့မှမပြောသင့်ပါဘူး၊ ငါ Debian ဆီကိုတာရှည်တာ၊ ကြာကြာတာတွေလုပ်လိမ့်မယ်လို့မထင်ဘူး။
ညံ့ဖျင်းသော Tomcat ဘယ်သူမှမလိုချင်ကြဘူး
ဘယ်သူက Java လိုချင်သလဲ။ 😛
ငါကတော့ဒီခေါင်းစဉ်တွေရှုပ်ထွေးနေပြီထင်တယ်၊ ဒီဇိုင်းပညာရှင်တွေပဲ၊ ပရိုဂရမ်မာတွေသာပါမယ်၊ နှစ်ခုစလုံးရှိတယ်။ winbug ကိုလွယ်လွယ်ကူကူမြင်နိုင်တဲ့သူတွေရှိတယ်၊ နောက်လာမယ့်လာမည့်“ all set” ကို install လုပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်စီးပွားဖြစ်နှင့် / သို့မဟုတ်လိုင်စင်ရဆော့ဖ်ဝဲများနှင့်အလုပ်လုပ်နိုင်မည်မဟုတ်ဟုဆိုလိုခြင်းကြောင့်အနည်းငယ် ပိုမို၍ အဆင့်မြင့်သော (နှင့် "သတ္တိ") linux အကြောင်းကိုသိပြီးပုံမှန်အားဖြင့်သူတို့ကြားရှိရှာတွေ့သည့်ကိရိယာများနှင့်အလုပ်လုပ်သူများရှိကြသည်။ ရှည်လျားသောစသည်တို့ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤဘလော့ဂ်တွင်မျှဝေနေစဉ်အယူအဆတစ်ခုသည် gnu-luxux တွင်မည်သည့်အကန့်အသတ်ရှိသည်ဖြစ်စေဖွံ့ဖြိုးသည်၊ ထို့ကြောင့်ရင်းမြစ်အရင်းအမြစ်များကိုမည်သည့်နေရာတွင်အသုံးပြုသည်၊ အခြေခံအကျဆုံးပြissueနာမှာလူတစ် ဦး ချင်းစီပေါ်တွင်မူတည်သည်၊ ကိရိယာများရှိသည်။ ဒါကငါတို့တောင်မှမသိသေးပေမယ့်လေ့လာချင်တဲ့အချိန်မှာငါတို့ပေးတဲ့အချိန်အထိနာရီအနည်းငယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရမယ်။ ပြီးတော့ငါတို့ (တခြားသူတွေဘယ်လိုပဲထင်မြင်ယူဆပါစေ) သက်တောင့်သက်သာခံစားရမယ်ဆိုရင်ငါတို့ပျော်ရွှင်လိမ့်မယ် !! (:
php5.6.3 အတွက်ဗားရှင်းကိုလည်းသင် download ရယူနိုင်သည်
၄ င်းသည်သင်တီထွင်နေသည့်အရာပေါ်မူတည်သည်၊ သင်လိုအပ်သောလိုက်ဖက်မှု၊ မူတည်၍ ၅.၅ ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရန်ကျွန်ုပ်သည် repo တွင်ရှိသော package များကို install လုပ်ပြီး၎င်းမှာ apache 5.5, php2.4 စသည်ဖြင့်အခြားစာကြည့်တိုက်များလည်းလွယ်ကူပါသည်။ install လုပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည် shell ကိုသဘောကျပြီးကျွန်ုပ်တတ်နိုင်သမျှအားလုံးကိုတပ်ဆင်ပြီးပြင်ဆင်သည်ကိုပိုနှစ်သက်သည်။
wpn-xm.org ကိုဤမြင်ကွင်းတွင်သင်မြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။ ၎င်းသည် linux အတွက်ဤကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုခုကိုရရှိရန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်သည်။ ငါပေါင်းစည်းသည်ဟုဆိုသော်၎င်းသည်အချို့သောကိရိယာများကိုအသုံးပြုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်စာကြည့်တိုက်အမြောက်အမြားရှိသော်လည်း၎င်းအားကျွန်ုပ်၏ Apache ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားသည်မှာဝမ်းနည်းပါသည်။ nginx အတွက်ပြောင်းလဲသွားသည်။ wpn-xm သည် LAMP နှင့် XAMPP တို့အတွက်အခြားနည်းလမ်းများကိုရှာဖွေနေသည်ကိုကျွန်ုပ်တွေ့ရှိခဲ့ပြီး၎င်းသည်အလုပ်စက်အတွက်ကောင်းမွန်သည်။ W $ + chrome အပေါ်ငါ့ရဲ့အရင်မှတ်ချက်အတွက်တောင်းပန်ပါတယ်
Raul casari ဟုသူကပြောသည်
သင်၏ပါဝင်မှုသည်အလွန်စိတ် ၀ င်စားပါသည်
Raul Casari ကိုပြန်ပြောပါ
မိုက်ကယ် Cardoza ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် Ubuntu ၏အသစ်ဖြစ်သည်၊ အစဉ်မပြတ်ငါ windows များကိုသုံးခဲ့သော်လည်း Ubuntu ကိုအသုံးပြုပြီး linux ပတ်ဝန်းကျင်သို့ပြောင်းချင်သည်။ သို့သော် folder များဖန်တီးရန် (သို့) htdocs တွင်ဖိုင်များကို Windows တွင်ရှိသကဲ့သို့၎င်းကိုခွင့်မပြုပါသို့မဟုတ်အချို့သောအရာများရှိသည်။ ငါ windows မှာလုပ်နိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့် Ubuntu မှာအဲဒါကိုအများကြီးပိတ်ထားလို့မရဘူးဒါမှမဟုတ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်ဖို့ခွင့်မပြုဘူး။ htdocs မှာဖိုင်တွေဖန်တီးဖို့သူတော်ကောင်းတရားကိုသုံးမယ်ဆိုရင်၊ မင်းကိုကူညီနိုင်ရင်ငါ့ကိုလည်းခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူး။ ငါ့ကို, ငါကတန်ဖိုးထားလိမ့်မယ်။
Michael Cardoza ကိုပြန်ပြောပါ
လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကကျွန်ုပ်သည် ၀ က်ဘ်ဒီဇိုင်းသင်တန်းငယ်တစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီး၎င်းကိုနှစ်သက်သည်။ သူတို့သည်ကျွန်ုပ်အား ၀ င်းဒိုးအတွက်ပရိုဂရမ်များပေးသော်လည်းကျွန်ုပ်ကိုသူတို့ဘယ်တော့မျှ install မလုပ်ပါ။
လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်ကနောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်သည် Linux Ubuntu သို့ပြောင်းလဲသွားနိုင်ပြီးမည်သည့်ပရိုဂရမ်ကိုမှရှာမတွေ့ပါ
Dreamweaver, Flash MX နှင့်ဓာတ်ပုံပြုပြင်ရန်အတွက်ဖြစ်သော်လည်းအခြားအမည်ကိုငါမမှတ်မိ။
သင် download လုပ်ထားသောဝက်ဘ်ဆိုက်များသို့မဟုတ်လမ်းကြောင်းများကိုငါဖော်ပြခဲ့သည့်အရာများနှင့်ညီမျှစေရန်ထည့်သွင်းဖော်ပြနိုင်ပါသလား။